अर्थ संसार: 5/1/11 - 6/1/11
सीए कोर्सका प्रतिविद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दो छ
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) कोर्समा विद्यार्थीहरूको आकर्षण कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको सीए कोर्षकाप्रति आकर्षण बढेको छ । पहिला व्यवस्थापन विषयका विद्यार्थीले मात्र रुचि देखाउने यो कोर्समा हाल विज्ञान संकायका विद्यार्थीको समेत रुचि बढ्न थालेको छ । अहिले सीए पढ्ने कुल विद्यार्थीमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत विज्ञान संकायका छन् ।
विश्वमा कानुन र चिकित्सकजस्तै सीएलाई पनि आकर्षक पेसाका रूपमा लिइन्छ । सीएको पढाइलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि पछिल्लो समय यस क्षेत्रप्रतिको अध्ययनमा आकर्षण बढ्दो छ । आर्थिक हिसाबले पनि सहज भएकाले यसप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको हो । चिकित्सा विज्ञान मात्र होइन हालै आएको बीबीएभन्दा पनि सीएको पढाइ खर्चका हिसाबले सस्तो पर्छ । पढ्दै गर्दा कमाउने अवसर मिल्ने र कोर्ष पूरा भएपछि रोजगारीसमेत सहज रूपमा पाउने भएपछि यस विषयकाप्रति आकर्षण बढेको हो । नेपालमै पढ्दा विद्यार्थीले ट्युसन, रजिस्ट्रेसन र परीक्षाका लागि करिब पौने ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर इन्टर्नसिपमा आउने कमाइलाई कटाउने हो भने खुद १ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ । जबकि अन्य विषय पढ्दा इन्टर्नसिपमा जाँदासमेत आफ्नै पैसा खर्चनुपर्छ । त्यस्तै सीएसँगै आफूलाई अनुकूल हुने बीबीएस शैक्षिक कोर्ष पनि पढ्न सकिन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा सीए कोर्सप्रति आकर्षण बढ्दो रहेको भन्न सकिन्छ ।
रोजगारीको सम्भावना कस्तो छ ?
सीएहरूका लागि हालसम्म नेपालमै ठूलो बजार छ । बैंकिङलगायतका क्षेत्रमा सीएहरूले सजिलै काम पाउँछन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यानले) हालै ‘एक व्यक्ति एक पद’ प्रावधान लागू गरेकाले अवसरहरू अझ बढेको छ । यसबाट भोलिका दिनमा सीएहरूका लागि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन सीए पढ्दै गर्दा विद्यार्थीले कमाउने अवसर पाउँछन् । दोस्रो तहको परीक्षा पास गरेपछि तेस्रो तहको इन्टर्नसिप अवधिदेखि नै विद्यार्थीले कमाउन सक्छन् । सीए पास गरेपछि न्यूनतम २५–३० हजार रुपैयाँको काम सहजै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अन्य विषयको अध्ययनमा खासै देखिँदैन ।
सीसीएमएले आफ्ना विद्यार्थीलाई के–कस्ता सुविधाहरू दिएको छ ?
सीसीएमए सन् २००३ मा स्थापना भएको हो । हामीले नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा सीए कोर्स गर्न चाहनेका लागि ट्युसनलगायतका सेवा दिँदै आएका छौं । नेपालको कोर्सका लागि सबै तहको ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । त्यसैगरी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप ट्रेनिङ र सीए पास गरेपछि जागिरका लागि समेत सहयोग गर्दै आएका छौं ।
त्यस्तै भारतमा कोर्स गर्न चाहेमा पहिलो तहको ट्युसन कक्षामात्र सञ्चालन गरेका छौं । त्यसभन्दा माथिको अध्ययनका लागि भने भारत नै जान सुझाव दिन्छौं । किनभने भारतमा कोर्स गर्नका लागि त्यहाँको वातावरणमा भिज्नु आवश्यक हुन्छ ।
हालसम्म सीसीएमएले पढाएका कति विद्यार्थी सीए भए ?
नेपाल र भारतमा गरी हालसम्म १५ जना विद्यार्थीले सीए उत्तीर्ण गरेका छन् । सीसीएमएमा पढेका विद्यार्थीले भारतस्थित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया (आइकाइ)मा सुजित रावतले ‘सेकेन्ड ¥यांक’ प्राप्त गर्नुका साथै आईक्यानको परीक्षामा पनि उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका छन् ।
सीसीएमएले विद्यार्थीलाई के–कस्तो सुविधा दिँदै आएको छ ?
हामीले नेपाल र भारतमा सीए कोर्स गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सबै सेवा दिँदै आएका छौं । नेपालमा कोर्स गर्ने विद्यार्थीका लागि सबै तहको कोर्षका ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौं भने भारतमा जाने विद्यार्थीका लागि पहिलो तहको मात्र कोर्स पढाउँदै आएका छौं ।
सीसीएमएले अनुभवि प्रोफेसरहरू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमार्फत नै पढाउँदै आइरहेको छ । त्यस्तै सीसीएमएमा विद्यार्थीका लागि सबै सुविधा सम्पन्न पुस्तकालयसमेत उपलब्ध छ । यसैगरी हामीले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । कलेजमा उत्कृष्ट र आइक्यानको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीका साथै दलित, जनजाति र द्वन्द्वपीडितलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छौं ।
अझै पनि सीए कोर्सका लागि भारत जाने प्रवृत्ति कायमै छ । नेपाल र भारतमा हुने सीए कोर्समा के फरक हुन्छ ?
कोर्सका हिसाबले खासै फरक हुँदैन र पढिने विषयहरू लगभग एउटै हुन्छ । कानुन र करका बारेमा भने सम्बन्धित देशमा रहेको विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत पढाइ हुने गर्छ । तर, अवसरका हिसावले नेपालमा भन्दा भारतमा पढेका विद्यार्थीले धेरै अवसर पाउँछन् । नेपालमा काम गर्नका लागि नेपालमा पढेका व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ ।
सीए परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन्, नि ?
सीए एउटा व्यावहारिक कोर्स हो । अन्य शैक्षिक कोर्सभन्दा अलि गाह्रो छ । परीक्षाका नियमहरू पनि कडा छन् । सोहीअनुसार विद्यार्थीको तयारी नहुने हुनाले धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेका हुन् । सीए उत्तीर्ण गर्न विषयगत रूपमा ४० प्रतिशत र समग्रमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ समूहगत रूपमा तालमेल नमिल्दा परिणाम सोचेजस्तो हुँदैन । सीए कोर्समा सबैभन्दा गाह्रो दोस्रो तहमा हुन्छ । जो विद्यार्थीले सीएको दोस्रो तह पार गरेर अन्तिम लेबलमा पुग्छ उ ढिलो चाँडो सीए बन्ने कुरामा कुनै द्विविधा राख्नुपर्दैन ।
सीए कोर्षका लागि ट्युसन पढाउने संस्थाहरूको बीचमा सीसीएमए नै किन ?
वास्तवमा अहिले सीए कोर्ष ट्युसन पढाउने भनेर धेरै संस्थाहरू खुलेका छन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू सस्तो विज्ञापन र हल्लाको पछि नलागि कहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ त्यसको खोजी गर्नु आवश्यक छ । सस्तो भन्दैमा विद्यार्थी र अभिभावक त्यतातिर कुद्नु पनि हुँदैन । बस्तुस्थिति सम्बन्धित संस्थामार्फत बुझेर उपयुक्त लागेपछि मात्र निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । अझ नियामक निकायका रूपमा आइक्यान रहेको छ त्यहाँ गएर पनि कुन संस्था कस्तो हो भन्ने बारे बुझ्न सकिन्छ ।
सीएका लागि निकै लामो समय लाग्नुको कारण ?
समयका हिसावले यो त्यति लामो अवधि होइन । खासमा सीए कोर्ष ५ वर्षमा पूरा हुन्छ । तर, परीक्षा समयमा तालमेल नमिल्दा ६ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसतर्फ भने नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
Posted by Yadav Humagain at 5:54 AM
डलर बढेपछि सुनको मूल्य उच्च
प्रतितोला ४३ हजार १ सय
अमेरिकी डलरको भाउ मजबुत भएपछि त्यसको असर सुनको मूल्यमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यसँगै डलर पनि मजबुत भएपछि स्थानीय बजारमा सुन महँगो भएको हो । सुनसँगै डलर पनि मजबुत भएकाले नेपालमा सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार बुधबार स्थानीय बजारमा सुन प्रतिदस ग्राम ३६ हजार ९ सय ५० (प्रतितोला ४३ हजार एक सय) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । मंगलबार सुनको भाउ प्रतिदस ग्राम ३६ हजार ६ सय १० (४२ हजार ७ सय) रुपैयाँ थियो ।
यसअघि वैशाख १८ गते पनि आजकै मूल्यमा कारोबार भएको थियो । उक्त दिन अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ प्रतिऔंस १ हजार ५ सय ७० डलर पुगेको थियो । तर, बुधबार भने अन्तर्राष्ट्रिय भाउ एक १ हजार ५ सय २७ डलर मात्र पुग्दा डलरको भाउ बढेकाले स्थानीय बजारमा सुन महँगो भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य सामान्य बढे पनि डलरको मूल्य बढेकाले महँगोमा भएको हो,” नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने । यसपटक डलरको मूल्य बढेकाले भाउ महँगो भएको शाक्यले बताए । “यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ हजार ५ सय ७० डलर पुग्दा नेपालमा ४३ हजार १ सय मात्र थियो अहिले १ हजार ५ सय २७ डलर हुँदै नेपाली बजारमा ४३ हजार नाघेको छ ।”
वैशाख १८ गते प्रतिइकाई ७०.६५ रुपैयाँ रहेको अमेरिकी डलरको भाउ बढेर जेठ १२ गते ७०.०५ पुगेको छ ।
वैशाख अन्तिमबाट क्रमशः ओरालो लागेको सुनको मूल्य गत सातादेखि पुनः बढ्न थालेको हो । क्रमशः घट्दै गत साता १ हजार ४ सय ९५ डलरसम्म झरेको सुनको भाउ पुनः बढेर बुधबार बेलुकीसम्म १ हजार ५ सय २७ डलर पुगेको छ ।
सुनको मूल्यसँगै डलर पनि मजबुत हुँदा नेपाली बजारमा धेरै असर पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बढ्यै छ,” शाक्यले भने, “डलरसमेत मजबुत भएकाले नेपालीमा अझै महँगो हुन सक्छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राजनीतिक उथलपुथलका साथै सुनको मागसमेत बढेकाले मूल्य उकालो लागेको व्यवसायी तथा विश्लेषक बताउँछन् । “पछिल्लो दुई वर्षयता चीन र भारतमा सुनको खपत अत्याधिक बढेकाले नै सुनको मूल्य उच्च भएको सिटीजन बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत राजु नेपाल बताउँछन् । माग वृद्विसँगै सुनका नयाँ खानीहरू पत्ता नलागेको र उत्पादन नबढेकाले माग र आपूर्तिमा अन्तर भई मूल्य उच्च भएको उनको भनाइ छ ।
संघका महासचिव शाक्य भने माग बढ्दैमा मूल्य बढ्ने सम्भावना १० प्रतिशत मात्र हुने बताउँछन् । कमोडिटी बजारमा हुने उतारचढावले मुख्य रूपमा सुनको मूल्यलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा सेयरमा भन्दा सुनमा लगानी बढेकाले मूल्य उच्च हुन सघाएको उनले बताए । एसियाली देशमा पछिल्लो समयमा सुनको माग बढेको उनले स्वीकार गरे । पछिल्लो समयमा भारत र चीनका केन्द्रीय बैंकले समेत सुनको मौजाद बढाउन लागेकाले मूल्य माग बढेको उनले बताए ।
यसैगरी बुधबार स्थानीय बजारमा चाँदी ३२ रुपैयाँ बढेको छ । मंगलबार प्रतिदस ग्राम ८ सय ७३ रुपैयाँ रहेकामा बुधबार ९ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।
Posted by Yadav Humagain at 3:07 AM
उपत्यकाका पाँच सय सहकारी कारबाहीमा
काठमाडौं, ५ जेठ
उपत्यकाका करिब ५ सय बचत तथा ऋण सहकारी कारबाहीमा परेका छन् । सहकारी विभागले मासिक वित्तीय विवरण नबुझाएका सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको हो ।
काठमाडौंका ३ सय ३५, ललितपुरका १ सय र भक्तपुरका करिब एक दर्जन सहकारीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले ती सहकारीलाई १ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छन् ।
“७ गतेभित्र वित्तीय विवरण नबुझाएका सहकारीलाई चेतावनी स्वरूप जरिवाना गरेका हौं,” काठमाडौंका सहकारी अधिकृत केशवबहादुर थापाले भने, कार्यालयले जरिवानाबाट गत वैशाखमा ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थापाले जानकारी दिए ।
विभागले गत माघदेखि बचत तथा ऋण सहकारीलाई कारोबार विवरण मासिक रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनलाई सहकारी संस्थाले अटेर गरेपछि वैशाखदेखि जरिवाना गर्न थालेको हो । ७० प्रतिशत सहकारीले मात्र मासिक विवरण बुझाउने गरेकामा जरिवाना गर्न थालेपछि भने विवरण बुझाउने संस्थाको संख्या बढेको सहकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले गत माघमा गरेको सघन अनुगमनमा सहकारीको कारोबार अपारदर्शी र अनियन्त्रित भएको पाइएपछि सहकारी कारोबारको विवरण मासिक रूपमा लिन सुरु गरिएको हो । विभागले हाल सहकारीबाट निक्षेप र कर्जाका साथै सेयर पुँजी, विभिन्न जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकमलगायतबारे विवरण लिँदै आएको छ । विवरण संकलनदेखि विश्लेषणसम्मका लागि विभागलाई केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ ।
विभागका अनुसार चैतसम्मको तथ्यांकअनुुसार उपत्यकाका सहकारीले मात्र साढे १ खर्ब बचत परिचालन गरेका छन् ।
यसैबीच विभागले एक करोडभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेका सहकारीले मात्र मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाख १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सहकारी संघसंस्था दर्ता तथा नियमन मापदण्डमा–२०६८’ ले एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीले वार्षिक रूपमा मात्र विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै सहकारीले मासिक रूपमा कारोबार विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
“सहकारीकर्मीबाट आएको सुझावका आधारमा सानो कारोबार भएका सहकारीलाई मासिक विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,” विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने । सानो पुँजी भएका सहकारीमा स्रोत साधनसमेत सीमित हुने भएकाले मासिक विवरणलाई सरल बनाइएको उनको भनाइ छ ।
Posted by Yadav Humagain at 1:34 AM
साताभर सुनचाँदीको मूल्य उच्च
स्थानीय बजारमा साताभर सुनचाँदीको मूल्य उच्च भएको छ । राजनीतिक उतारचढाव, डलरको अवमूल्यनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढेपछि स्थानीय बजारमा त्यसको असर परेको हो ।
स्थानीय बजारमा आईतबार र सोमबार प्रतिदस ग्राम ३६ हजार ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ मंगलबार र बुधबार भने सामान्य ओरालो लाग्यो । विहिबारवाट पुनः उकालो लागेको सुनको भाउँ शुक्रबार प्रतिदस ग्राम ३६ हजार ३ सय ९५ मा कारोबार भई एतिहासीक रेकर्ड कायम गरेको छ ।
यो साता सर्वाधिक महँगोमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असर स्थानीय बजारमा परेको हो । स्थानीय बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सुनचाँदीको मूल्य दैनिक निर्धारण हुन्छ । विवाहको सिजनमा सुनचाँदीको भाउ महँगो भएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । बजारमा सुनको बिक्रीसमेत घटेको व्यवसायी बताउँछन् ।
यसैगरी यो साता चाँदीको भाउले पनि रेकर्ड कायम गरेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम १ हजार १ सय ४० रुपैयाँ रहेको चाँदीको क्रमश घट्दै मंगलदबार १ हजार ८४ रुपैयाँमा झर्र्यो । बुधबार बाट भने पुनः उकालो लागेर शुक्रबारसम्म पुग्दा ऐतिहासीक रेकर्ड कायम भई प्रतिदस ग्राम १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बढ्यै छ” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “यो साता सुनचाँदी नै महंगोमा कारोबार भयोे ।” महंगो भएपछि व्यवसायीका लागि ‘सिजन’ भएपनि मूल्य उच्च भएपछि व्यापार नबढेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यो साता मूल्य उच्च भएको छ । आईतबार प्रतिऔस १ हजार ५ सय १८ डलर रहेकोमा शनिबार बेलुकीसम्म १ हजार ५ सय ३० डलरबाट उकालो लागेको छ । इजिप्टको राजनीतिक तनावपछि सुनचाँदीको भाउ उकालो लागेको हो । लिबियामा बहुराष्ट्रिय सेनाको आक्रमणको भारत, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशको विरोध गरेपछि सुनको मूल्य उच्च भएको हो । हाल अमेरिकी डलरसमेत कमजोर भएका कारण सुनमा लगानी बढेकाले मूल्य उकालो लागेको बताइएको छ ।
भारत, चीन लगायतका देशहरूमा सुनको खपत बढिरहेका कारण भाउ अझै उकालो लाग्ने सक्ने विश्लेषक बताउँछन् । पछिल्लो समयमा सेयरभन्दा सुन भरपर्दो लगानीको क्षेत्र बन्दै गएकाले कारोबार बढेको तर उत्पादन नबढेका कारण मूल्य उच्च भएको हो ।
Posted by Yadav Humagain at 12:39 AM